हाम्रोखबर बिहीबार, आषाढ ११ २०७७
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलका नेताहरुलाई सामूहिक रुपमा डाकेकै दिन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको एक सन्देश आयो ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलका नेताहरुलाई सामूहिक रुपमा डाकेकै दिन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको एक सन्देश आयो । अघिपछि कुनै विशेष दिन वा अवसरका समयमा आउने पूर्वराजाको सन्देश धेरै शुभकामना र केहि समवेदनाका हुने गरेकामा बुधबार आएको सन्देश भने नितान्त फरक देखिन्छ ।
पूर्वराजाको सन्देशमा उनी देश र जनताप्रति निकै संवेदनशील रहेको देखिन्छ । सायद यसैले पनि हुनसक्छ उनले सन्देशमा धेरै प्रश्नहरु उठाएका छन । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय उनले निषेध एवं आरोप प्रत्यारोपको राजनीतिले कसैको हित नहुने सुझाएका छन । राष्ट्रियता हाम्रो मुल मन्त्र भएको र एकता नै हाम्रो शक्ति भएको सम्झाउँदै उनले यही ऐतिहासिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्दै अतितबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नु हाम्रो राष्ट्रिय कर्तव्य र धर्म भएको उनले बताएका छन ।
यसको अर्थ के बुझ्न सकिन्छ भने फेरि एकपटक राजा र राजनैतिक दल मिलेर सँगै अघि बढ्नु पर्ने चाहना पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको देखिन्छ । हो, पूर्वराजाले उठाएका सवालहरु समयसापेक्ष र देशको परिस्थितिसँग मिल्दोजुल्दो रहेका छन । देश कोरोना भाइरसको चपेटासँगै विकृति र विसंगतीसँग संघर्षरत छ । त्यसैले पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले उठाएका यी सवालहरुलाई अन्यथा मान्न सकिदैन ।
उनको प्रश्न छ– ‘हाम्रो देशभक्ति, स्वाधीन स्थिति एवं स्वाभिमानमाथि बारबार किन प्रश्न, सन्देह र विवाद विग्रह उत्पन्न हुन्छ ? जनताको सुरक्षा, स्वास्थ्य र जिविकाका विषयमा किन अलमल, असन्तोष र आक्रोश उठिरहन्छ ? रोगको महामारी, राष्ट्रियताको संकट, सीमा समस्या, राष्ट्रहित विरुद्धका सन्धि संझौता तथा हत्या, हिंसा र आत्महत्या जस्ता जल्दा बल्दा र दुखद विषय सन्दर्भमा पनि किन सधैंभरि विवाद आइरहन्छ ? भ्रष्टाचार, लापरवाही, पक्षपात जस्ता विषय पनि आइरहेको भन्दै उनी अगाडि थप्छन, ‘यस्ता यावत विषयलाई लिएर हाम्रा होनहार युवाहरु, तमाम देशभक्त स्वतन्त्र नागरिकहरु सडक संघर्षमा किन उत्रिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहन्छ ?’ पूर्वराजाले भने जस्तै यी विषय र प्रश्नहरु सोचनीय छन ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेताहरुलाई बोलाएर संसदबाट एकमतले नयाँ नक्सा पारित गरेकामा धन्यवाद दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । तर नक्सा पास त खुशीयालीको विषय हो । तर देशको वर्तमान अवस्था र जनजिबिकाको सवाल ठूलो र महत्वपूर्ण हो ।